FANADINAM-PANJAKANA - EFA TOMOMBANA NY FIKARAKARANA REHETRA - Ministère de l'Education Nationale
Sorona masina lehibe no nentin’ny fianakaviamben’ny sekoly katolika nankalaza ny andron’ny sekoly katolika androany Zoma 27 Mey 2016 tetsy amin’ny CC ESCA Antanimena. Nanana solontena tamin’izany ireo sekoly katolika 651 manerana ny nosy. Nitarika ny sorona masina ny Mgr Razanakolona Odon. Tonga nanatrika ny fotoana ny solontenan’ny ministry ny fanabeazampirenena, Dr Andriamampandry Todisoa. Taorian’ny lamesa dia nisy ny fandraisam-pitenenana fohy nataon’ireo tomponandraikitra hitondra izany. Ny tale jeneralin’ny fanabeazampirenena Andriamampandry Todisoa izay nandray fitenenana dia nanambara fa miara mitempo fifaliana aminareo izahay ary faly miarahaba anareo amin’izao andron’ny sekoly katolika izao.Maniry soa anareo tomponandraikitra eto amin’ny sekoly katolika indrindra ny Mgr Razanakolona Odon. Ao amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena hoy izy dia misy foana ny tombana ka ny vokatra rehetra dia ny sekoly katolika no voalohany.Miarahaba anareo sekoly sy mpampianatra amin’izany fa ny sekoly katolika no maodely amin’ny fanabeazana sy fahaizana ka mendrika alaina tahaka. Be ny tsaho hoy izy fa hoe hahemotra ny fanadinana. Eto ao dia milaza hoy izy fa tsy misy fanadinanana mihemotra izany fa efa voaomana daholo ny zavatra rehetra, izany dia fiaraha-miasa eo amin’ny sekoly miahy tena. Miainga izao ny fanadinana ka dia ianareo no andrasana , noho izany dia mirary anareo ho afaka fanadinanana daholo ary ho voalohany ianareo sekoly katolika. Tsy voalohany fotsiny no ilaina fa mahay mikaroka ny zavamisy. Nisy moa ny marim-pankasitrahana natolony ho an’ny sekoly katolika.